Sabotsy, Janoary 22, 2022 Zoma 19 Novambra 2021 by Joshua James
Ampidiro ny tahiry XanMod
Mametraka XanMod Linux Kernel
Ahoana ny fanavaozana XanMod Linux Kernel
Ahoana ny fanesorana (esorina) XanMod Linux Kernel
XanMod dia maimaim-poana, loharano misokatra malalaka Linux Kernel safidy ho an'ny tahiry kernel miaraka amin'ny Linux Mint 20. Izy io dia manasongadina fandrindrana manokana sy endri-javatra vaovao ary natsangana mba hanomezana traikefa desktop mandray andraikitra sy milamina, indrindra ho an'ny fitaovana vaovao. XanMod dia malaza eo amin'ny Linux Gaming, streaming, ary ny fepetra faran'izay ambany indrindra ary matetika mirehareha ny Linux Kernels farany indrindra, manana sampana maro azo isafidianana amin'ny stable, sisiny ary fampandrosoana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny XanMod Kernel alohan'ny hametrahana azy, tsidiho ny pejy fampahalalana momba ny XanMod Kernel.
XanMod ihany no manohana x86_64 maritrano fanodinana.
Amin'ity lesona manaraka ity dia hianatra ianao ny fomba fanafarana ny tahiry XanMod sy ny fametrahana ny Linux Kernel farany indrindra amin'ny rafitra fiasanao Linux Mint 20.xx.
OS naroso: Linux Mint 20 na ambony.
Kaonty mpampiasa: Kaonty mpampiasa misy sudo or fidirana faka.
Update your Linux Mint rafitra fiasana mba hahazoana antoka fa ny fonosana rehetra efa misy dia tsy misy farany:
Raha hanangana kaonty sudo efa misy na vaovao dia tsidiho ny lesonay momba ny Manampy mpampiasa amin'ny Sudoers amin'ny Linux Mint.
Ny lesona dia hampiasa ny terminal, ary ho an'ireo tsy mahazatra dia hita ao amin'ny menio fampiharana fampisehoana.
Ny asa voalohany dia ny manafatra ny tahiry XanMod. Azo atao amin'ny fomba maro izany, fa ny lesona dia hampiasa ny terminal apt package manager mba hanatsorana zavatra.
Voalohany, manafatra ny tahiry mampiasa ity baiko manaraka ity.
Hamarino fa niasa ny baiko tamin'ny alàlan'ny baiko grep.
Miaraka amin'ny fanafarana tsara ny tahiry, ny asa manaraka dia ny manafatra ny lakile GPG amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity.
Ohatra vokatra raha mahomby:
Manaraka, havaozy ny lisitry ny loharanon-tsarimihetsika APT ho taratry ny fanampiana vaovao.
Ny tahiry dia matetika manana fonosana vaovao ho an'ny fiankinan-doha efa napetraka, araka ny mety ho hitanao.
Alohan'ny hanohizana, mihazakazaka ny apt upgrade command.
Miaraka amin'ny tahiry XanMod napetraka sy ny daty, azonao atao ny mametraka ny kernel Linux avy amin'ny XanMod.
Araka ny voalaza teo am-piandohan'ny fampianarana dia misy sampana telo azo isafidianana. Amin'ny fotoan'ny fampianarana, ny stable dia manana version 5.14, ny sisiny dia manana ny stable 5.15 farany indrindra, ary ny fampandrosoana dia manana ny tsy miovaova farany amin'ny kernel Linux Kernel 5.15.
Ny lesona dia handeha amin'ny fametrahana ireo telo ireo, saingy asaina mifikitra amin'ny stable sy ny sisiny, aza mampiasa fampandrosoana raha tsy fantatrao izay ataonao.
Raha hametraka XanMod stable:
Raha hametraka XanMod edge:
Raha hametraka ny fampandrosoana XanMod:
Output ohatra avy amin'ny (sisiny):
Raha vao tafapetraka ny kernel Linux repository voafidy dia mila averinao indray ny rafitrao mba hamitana ny fametrahana.
Rehefa tafaverina amin'ny rafitrao ianao dia hamarino ny fametrahana.
Tamin'ny fotoan'ny fampianarana, ny sampana sisiny dia nahitana Linux kernel 5.15.2.
Na azonao atao ny mampiasa ny baikon'ny saka.
Mba hitazonana ny kernel Linux napetrakao amin'ny XanMod hatramin'ny farany, dia hanatanteraka ny fanavaozam-baovao mahazatra sy ny baiko fanavaozana ianao raha nametraka XanMod tamin'ny APT, izay nasehon'ny lesona.
Mba hanamarinana ny fanavaozana.
Raha misy fanavaozana azo atao.
Raha tsy izany, ny mpampiasa ao amin'ny stable dia afaka manavao amin'ny sisiny amin'ny alàlan'ny baiko fametrahana. Ny tsara indrindra dia aza mifanakalo matetika. Mety hiteraka olana izany.
Mba hanesorana XanMod, ampiasao ity baiko manaraka ity.
Izany dia hanala tanteraka ny dian'ny XanMod azo atao sy tsy ampiasaina.
Ny tsara indrindra dia azonao atao koa ny manala ny tahiry.
Raha tsy izany, mety mila manaisotra ny fonosana fanampiny XanMod ianao miaraka amin'ireto manaraka ireto.
Voalohany, mila mampiasa ny anaran'ny sary sy ny lohapejy Linux ianao. Ity dia azo jerena amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity dpkg -lisitra baiko.
Aza hadino ny manolo ny 5.15.3 amin'ny dikan-teny vita pirinty amin'ny baiko dpkg –list.
Fampitandremana, araho ity baiko manaraka ity mba hahazoana antoka fa manana Linux Kernel efa misy ianao.
Raha hijery na hametraka indray ny Linux Mint 20 LTS HWE Kernel:
Raha hijery na hametraka indray Linux Mint 20 LTS Generic Kernel:
Amin'ny alàlan'ny default dia tokony hapetraka ny kernel default.
Ohatra vokatra (HWE Kernel Rollback):
Ny tsy fanarahana na fanaovana izany dia hahatonga ny rafitrao ho tsy azo fehezina ary hiteraka aretin'andoha.
Avereno indray ny PC anao hamita ny fanesorana ny XanMod.
Araka ny nasehon'ny vokatra etsy ambony, dia niverina tany amin'ny kernel Linux default izay nentin'ny Linux Mint 20 ianao, ka nanala ny XanMod tamin'ny rafitrao.
Ao amin'ny lesona dia nianatra ny fomba fametrahana XanMod amin'ny Linux Mint 20.xx ianao. XanMod dia natao ho an'ny mpampiasa desktop miaraka amin'ny fitaovana farany indrindra, saingy azo apetraka amin'ny desktop Linux Mint izay tohana ankehitriny. Na izany aza, manoro hevitra ny hanao fikarohana alohan'ny hanavaozana, ary tsy mety ny mampiasa azy amin'ny rafitra mitsikera na karazana famokarana.
Ny iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ny fampiasana XanMod dia ny hoe rehefa tonga ny Linux Kernel manaraka, dia tafiditra ao amin'ny fampandrosoana / sisiny haingana be. Noho izany, mendrika ny mijery izany, indrindra raha toa ianao ka milalao Linux.
Sokajy Linux Mint Tags Linux Kernel, Linux Mint 20, XanMod Kernel Post Fikarohana